ဝိုငျဖိုငျ လိုငျးဆှဲအား ကို နှေးအောငျ လုပျနတေဲ့ သတိပွုစရာ အိမျတှငျး ပစ်စညျးမြား (ရှယျထားပေးပါအုံး ….) – Shwe Likes
ဝိုငျဖိုငျ လိုငျးဆှဲအား ကို နှေးအောငျ လုပျနတေဲ့ သတိပွုစရာ အိမျတှငျး ပစ်စညျးမြား (ရှယျထားပေးပါအုံး ….)
G Shwe | May 27, 2021 | Knowledge | No Comments
နည်းပ ညာတွေ အဆင့်မြင့်လာတာနဲ့ အမျှ အိမ်တိုင်းနီးပါးမှာ ဝိုင်ဖိုင် တွေ တပ်ဆင်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကွန်နက်ရှင် မကောင်း လို့ စိတ်ညစ်ရတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီး ရှိနေ မှာပါ။
တခြားအိမ်တွေမှာ ကွန်နက် ရှင် ကောင်းရက်နဲ့ သင့်အိမ်မှာ တခုခု ဖြစ်နေ တယ်ဆိုရင် အခုဖော်ပြတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေလို့ ဖြစ်ပါ လိမ့် မယ်။
ဝိုင်ဖိုင်စက် ကို သတ္တု မျက်နှာပြင်ပါတဲ့ ခုံပေါ် တင်ခြင်းကြောင့် ဝိုင်ဖိုင်နှေး တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သတ္တုဟာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်တာ ကြောင့် လျှပ်စစ်စွမ်း အားတွေကို စုပ်ယူလို က်တာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ အိမ်တွင်း ပရိဘောဂ ပစ္စည်းတွေက လျှပ်စစ်လှိုင်းတွေရဲ့ သွားလာမှုကို အတားအဆီး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဝိုင်ဖိုင်ကို မြန်စေချ င်တယ်ဆိုရင် သတ္တု ပစ္စည်းတွေရဲ့ ဝေးရာမှာ ထားဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ဝိုငျဖိုငျ လိုငျးဆှဲအား ကို နှေးအောငျ လုပျနတေဲ့ သတိပွုစရာ အိမျတှငျး ပစ်စညျးမြား
မှန်ဟာ Router က ထုတ်လွှ တ်လိုက်တဲ့ အချက်ပြ လှိုင်းတွေကို ရောင်ပြန်စေပါတယ်။ မှန်ဟာ အကာအကွယ်တခုလို ဖြစ်နေပြီး ထုတ်လွှတ်လို က်တဲ့ လှိုင်းတွေကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြန်လည်နေေ စတာကြောင့် ကွန်နက်ရှင် မကောင်းတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှန်နဲ့ ဝေးဝေးမှာ ထားပါ။
ရေခဲသေတ္တာနဲ့ အဝတ်လျှော်စ က်တွေဟာ ရေကို အသုံး ပြုပြီး လည်ပတ်ရတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ ဝိုင်ဖိုင်စက်ရဲ့ အလုပ်လုပ်မှု ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ရေဟာ ဝိုင်ဖိုင် စက်က ထုတ်တဲ့ စွမ်းအားအချို့ကို ထိန်းသိမ်းထားတာကြောင့် အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ကို နှေးကွေး စေပါတယ်။
ဝိုင်ဖိုင်လို င်းကောင်းဖို့ အတွက်ဆိုရင် ဝိုင်ဖိုင်စက်ကို နည်းစနစ်တကျ ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲတဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ ဝေးရာမှာ ထားပါ။ Routerကို အမြဲ Update ပြုလုပ်ပါ။ အားကောင်းတဲ့ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို အသုံးပြုပါ။
(((( ဒီ Post လေးက အသုံးဝင်တယ် ဆိုရင်Share တစ်ချက် လုပ်ပြီး မျှဝေပေး လိုက်ပါ ခင်ဗျာ ))))မူရင်း ရေးသားသူအား လေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါသည်။
ယောကျြား က အပွီးတိုငျ ရဟနျးဝတျခဲ့ရငျ မိနျးမ(မယား)ကို ကှာရှငျးဖို့ လိုပါသလား……..
မဖွဈ မနေ …. “သငျ ကိုယျတိုငျ အောကျဆီဂငျြဗူး တပျဆငျရနျလိုအပျလာခဲ့ပါက..”
လောပိတ ဓါတျအားပေး စကျရုံကွီး မီးပကျြရငျ တဈနိငျငံလုံး မီးပကျြသှားမှာလား
မွနျမာနိုငျငံအတှငျးမှာ ဝယျယူရရှိနိုငျပီဖွဈတဲ့ ကိုဗဈ ကာကှယျဆေး Covishield ကို အတု နှငျ့ အစဈ အလှယျ ခှဲနိုငျတဲ့နညျးလမျးမြား